Saadaq Joon Oo Diiday inuu baneeyo Godka Jilacoow, iyo Muran ka taagan Arrintaasi. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Aug 28, 2018
Taliyihii hore ee ciidamada nabadsugida gobolka Banaadir Saadaq Joon iyo ciidamo uu wato ayaa wali dagan Xaruntii Nabadsugidda Gobalka Banaadir ee “Godka Jilacoow”, waxaana ka dhashay muran iyo isqabqabsi sababta uu u banayn la yahay Xaruntaasi oo ka mid ahayd sidoo kale Xabsiyadda NISA ay dadka ku xiraan.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in Saadaq Joon oo xilkii taliyenimo laga qaaday ayaa ciidamadii uu watay u geliyay dareeska ciidamada booliska, gaadiidkii tiknikadana wuxuu ku buufiyay calaamada booliska, tallaabadaasi oo Saraakiisha Ciidanka qaarkood ay Suaal galinayaan, una arkaan Afgambi lagu sameeyay Ciidankii NISA oo ahaa kuwo awood badan ku lahaa Muqdisho.
Saraakiisha booliska, nabadsugida, milateriga iyo wasiirka amniga ayaa si wada jir ah u dalbadeen in ciidamadaasi uu hogggaaminaayo Saadaq Joon ka guuraan xarunta Godka Jilacoow oo maxaabiista nabadsugida ku xiraan, hase ahaatee dalabkaasi wuu kasoo horjeestay Saadaq Joon.
Amaro kasoo baxay madaxweynaha ayaa dhawaan lagu kala diray ciidamadii xasilinta oo qeyb ka ahaayeen kuwa Saadaq Joon, qeybihii kalena xarumahooda lagu kala celiyay, halka kuwa Saadaq Joona ay diideen inay magaalada ka baxaan.
Saadaq Joon ayaa la aaminsan yahay inuu ku xiran yahay Raiisulwasaare Xasan Cali Khayre oo siiyay Awood dheeriya, taasoo u sahashay inuu sameeyo wax ka baxsan waxa uu Sharcigu u oggol yahay.
Sidee ayey HRW u aragtaa xariga Madaxweynihii hore ee DDSI Cabdi Cumar?